OCD परीक्षण | पत्ता लगाउनुहोस् यदि यो OCD, प्रकार, र गम्भीरता हो
ब्राड को बारे मा, हाम्रो संस्थापक
हाम्रो OCD परीक्षण
OCD गम्भीरता परीक्षण
OCD परीक्षण को प्रकार
OCD को बारेमा सबै
OCD को प्रकार
OCD सामान्य प्रश्न
OCD परीक्षण लिनुहोस्
पत्ता लगाउनुहोस् यदि यो OCD, प्रकार, र गम्भीरता हो
संसारको जनसंख्या को OCD संग बाँचिरहेका छन्
परिवार को अन्य सदस्यहरु को शर्त को पारिवारिक इतिहास संग शर्त भएको सम्भावना -
१० मा ((%२%)
75.8% अन्य चिन्ता विकारहरु सहित को संभावना, सहित:
सामाजिक चिन्ता / SAD
सामान्यीकृत चिन्ता / जीएडी
आतंक / चिन्ता हमलाहरु
156,000,000 विश्वव्यापी मानिसहरु
सबै जाति, जाति लाई प्रभावित गर्दछ
महिला र पुरुष बिच समान रुपमा फैलिएको छ
संयुक्त राज्य अमेरिका तथ्या्क
1 मा 40
वयस्क OCD बाट पीडित छन्
1 मा 100
बच्चाहरु OCD बाट पीडित छन्
45,000 + मान्छे
एक दशक भन्दा बढी को लागी जुनूनी बाध्यकारी विकार को एक साथी पीडित को रूप मा, यो मेरो आशा छ कि यो वेबसाइट तपाइँ आशा, स्पष्टता, र कसरी OCD चक्र को अन्त्य गर्ने को समझ प्राप्त गर्न को साथ समर्थन गर्दछ।
OCDTest.com का संस्थापक
जुनूनी बाध्यकारी विकार के हो?
जुनूनी बाध्यता विकार (OCD) एक चिन्ता विकार दुई भागहरु बाट बनेको छ: जुनून र बाध्यता। OCD एक पुरानो, आनुवंशिक अवस्था हो कि महत्वपूर्ण संकट पैदा हुन्छ जब ठीक निदान र उपचार गरीदैन। OCD गम्भीर रूपमा एक व्यक्ति मानसिक, भावनात्मक र सामाजिक रूप मा प्रभावित गर्न सक्छ।
OCD को लक्षणहरुमा जुनून, जो सामान्यतया अनावश्यक घुसपैठ विचारहरु दोहोरिने विचारहरु, छविहरु, वा आवेगहरु कि नकारात्मक छन् र संकट र असुविधा को रूप मा अनुभव गरीन्छ भनेर जानिन्छ।
हाम्रो OCD उपप्रकार परीक्षण इन्टरनेट मा सबै भन्दा व्यापक OCD प्रकार परीक्षण हो। हाम्रो लक्ष्य एक परीक्षण सिर्जना गर्न को लागी थियो कि स्पष्ट रूप देखि संकेत गर्दछ कि OCD को प्रकारहरु उपस्थित छन् र कुन डिग्री को लागी उनीहरु उपस्थित छन्। यो परीक्षण व्यक्तिगत परीक्षण प्रति4प्रश्न, यो उपप्रकार परीक्षण मा कुल १५२ प्रश्नहरु को हुन्छ।
OCD परीक्षण लिनुहोस्:
ओसीडी परीक्षण OCD गम्भीरता परीक्षण OCD परीक्षण को प्रकार
जुनूनी बाध्यकारी विकार (OCD) परीक्षण र आत्म मूल्यांकन
हाम्रो वेबसाइट OCD गम्भीरता परीक्षण, OCD घुसपैठ विचार परीक्षण, OCD परीक्षण को प्रकार, र OCD टेस्ट को व्यक्तिगत उपप्रकार सहित धेरै OCD परीक्षण विकल्पहरु प्रदान गर्दछ। OCD गम्भीरता परीक्षण OCD संग बिरामीहरु मा OCD लक्षण को गम्भीरता र प्रकार को आकलन गर्न को लागी डिजाइन गरीएको हो। तपाइँ परीक्षण सुरु गर्नु अघि, निम्न परिभाषाहरु र "जुनून" र "बाध्यता" को उदाहरण पढ्नुहोस्। OCD गम्भीरता परीक्षा लिनुहोस्।
यसको अतिरिक्त, हामी पनि एक OCD उपप्रकार परीक्षण, जो OCD को प्रकार बाट तपाइँ पीडित हुन सक्छ पहिचान गर्न मद्दत प्रदान गर्दछ। यो परीक्षण OCD को 38 उपप्रकार को कुल छ। OCD प्रकार परीक्षण लिनुहोस्।
जुनसुकै दोहोरिने, अवांछित, घुसपैठ विचारहरु, छविहरु, वा आवेगहरु छन् कि नकारात्मक छन् र संकट र असुविधा को उत्पादन हो। OCD संग व्यक्तिहरु को लागी जुनूनी विषयहरु धेरै रूपहरु मा आउन सक्छन्; कीटाणु, आदेश, समरूपता, हानिको डर, हिंसात्मक विचार र छविहरु, यौन डर, धार्मिक र नैतिकता। सबै अवस्थामा, यी विचारहरु OCD संग एक व्यक्ति मा डर पैदा गर्दछन् किनकि उनीहरु आफ्नो पहिचान र जाति शंका र आफ्नो जीवन मा अनिश्चितता को बिरुद्ध जान्छन्।
चिन्ता, डर, लाज, र/वा एक जुनून बाट घृणा को असुविधाजनक भावनाहरु लाई मुक्त गर्न को लागी, एक कार्य वा व्यवहार को लागी कम गर्न वा संकट को समाप्त गर्न को लागी प्रदर्शन गरीन्छ। यसलाई बाध्यता भनिन्छ। बाध्यता, वा चिन्ता वा अपराध बाट बच्न वा कम गर्न को लागी कुनै कार्य, धेरै रूप मा पनि आउन सक्छ; सफाई, धुने, जाँच, गिनती, tics, वा कुनै मानसिक काम प्रतिस्थापन वा मानसिक रूप मा जाँच गर्न को लागी यदि एक वा जुनूनी विचारहरु को कुनै प्रदर्शन गर्न सक्षम छ।
OCD र OCD चक्र कति सामान्य छ?
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक अध्ययन OCD दस प्रमुख रोगहरु को बीच मा पहिचान गरीएको छ, जो मनोसामाजिक हानि को उच्च स्तर संग सम्बन्धित छ। OCD चौथो सबैभन्दा सामान्य मनोरोग विकार र संसार भर मा अपाability्गता को 10 औं प्रमुख कारण बन्यो। संयुक्त राज्य अमेरिका मा मात्र OCD (अन्तर्राष्ट्रिय OCD फाउंडेशन, २०१)) बाट पीडित तीन लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरु छन्।
OCD परिभाषा को बारे मा अधिक पढ्नुहोस्।
OCD चक्र प्रकृति मा परिपत्र छ, एक घुसपैठ सोच (जुनून) बाट सर्दै, डर, संदेह वा चिन्ता ट्रिगर, डर र चिन्ता बाट राहत पाउन को लागी एक बाध्यकारी कार्य को आवश्यकता को कारण जुन जुनून उत्पन्न हुन्छ जुन मूल जुनून को पुन: ट्रिगर गर्दछ। चक्रीय समस्या पैदा भएको छ किनकि बाध्यता प्रदर्शन बाट असुविधा र संकट को कमी मात्र अस्थायी हो जब सम्म जुनून एक पटक फेरी अनुभव गरीन्छ।
यसबाहेक, चिन्ता मुक्त मात्र मूल सुदृढीकरण र बलियो गर्न को लागी कार्य गर्दछ। तेसैले, मूल कार्य वा ब्यवहार जसले सुरुमा कष्ट कम गर्‍यो एकपटक फेरी दोहोर्याईएको छ थप असुविधालाई मुक्त गर्न को लागी, र एक बाध्यता मा अनुष्ठान बन्छ। बारी मा, प्रत्येक बाध्यता जुनून को सुदृढीकरण, जो बाध्यता को थप कानून को लागी जान्छ। नतिजाको रूपमा, OCD को दुष्चक्र सुरु हुन्छ।
वयस्कों मा OCD को लक्षण
OCD के हो? अन्तर्राष्ट्रिय OCD फाउन्डेसन को अनुसार, OCD "एक मानसिक स्वास्थ्य विकार हो कि ...
के मेरो बच्चा को लागी एक अनलाइन OCD टेस्ट छ?
जुनूनी बाध्यकारी विकार, अधिक सामान्यतया OCD को रूप मा जानिन्छ, एक दुर्बल neuropsychiatric /छ ...
17 चीजहरु तपाइँ OCD को बारे मा जान्न आवश्यक छ
हामी सबैको आफ्नै अनौठो बानी, अन्धविश्वास, वा हानिरहित सानो अनुष्ठान छ कि हामी बोक्छौं।
रिकभरी यहाँ शुरू हुन्छ, OCD परीक्षण लिनुहोस्
अझै पनी प्रश्न छ कि यो OCD हो कि होइन? आज थाहा पाउनुहोस्।
© २०२१ ocdtest.com। सबै अधिकार सुरक्षित।
कृपया तलको विवरण प्रविष्ट गर्नुहोस्
OCD को साथी पीडित को रूप मा, यो कहिल्यै तपाइँ स्पाम को लागी हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यो जानकारी प्राप्त गर्न मा हाम्रो लक्ष्य OCD चक्र बाट बाहिर आएर तपाइँलाई समर्थन गर्न को लागी अतिरिक्त संसाधनहरु संग उपलब्ध गराउन जारी राख्नु हो। तपाइँ कुनै पनी समय मा यस बाट बाहिर निस्कने क्षमता हुनेछ।
३ individual व्यक्तिगत OCD उपप्रकार परीक्षण को एक चयन गर्नुहोस्*
३ individual व्यक्तिगत OCD उपप्रकार परीक्षण को एक चयन गर्नुहोस्1 - OCD परीक्षण जाँच2 - प्रदूषण OCD परीक्षण3 - गणना OCD परीक्षण4 - अस्तित्व / दार्शनिक OCD परीक्षण5 - खाना / व्यायाम OCD परीक्षण6 - भाग्य OCD टेस्ट भन्दै7 - हानिकारक OCD परीक्षण8 - स्वास्थ्य OCD / Hypochondria परीक्षण9 - हिट र OCD टेस्ट चलाउनुहोस्10 - समलैंगिक OCD - hOCD परीक्षण11 - अनाचार OCD परीक्षण12 - घुसपैठ विचार OCD परीक्षण13 - मात्र सही / सही OCD टेस्ट लाग्छ14 - जादुई सोच OCD टेस्ट15 - मानसिक / भावनात्मक संदूषण OCD टेस्ट१ - - दिमाग OCD परीक्षण पढ्ने17 - नैतिकता OCD परीक्षण18 - OCD परीक्षण जान्न आवश्यक छ१ - - घ्राण सन्दर्भ सिन्ड्रोम परीक्षण20 - Paranoia OCD टेस्ट21 - Pedophilia OCD - pOCD परीक्षण२२ - पूर्णतावाद OCD टेस्ट23 - प्रसवकालीन OCD परीक्षण24 - प्रसवोत्तर OCD परीक्षण25 - शुद्ध हे / विशुद्ध रूप से जुनूनी OCD टेस्ट26 - सम्बन्ध OCD - rOCD परीक्षण27 - धार्मिक OCD / Scrupulosity परीक्षण28 - जिम्मेवारी OCD परीक्षण29 - Rumination OCD टेस्ट30 - स्किजोफ्रेनिया / पागल OCD जाने डर31 - आत्म -हानि / आत्महत्या OCD परीक्षण३२ - यौन अभिविन्यास OCD परीक्षण33 - यौन आक्रामक OCD परीक्षण34 - सामाजिक चिन्ता OCD टेस्ट३५ - दैहिक / Sensorimotor OCD टेस्ट३ - - अन्धविश्वास OCD परीक्षण३ - - समरूपता / व्यवस्थितता OCD टेस्ट38 - हिंसात्मक / आक्रामक विचार OCD टेस्ट
ईमेल द्वारा तपाइँको परिणाम प्राप्त गर्नुहोस्